अन्तराष्ट्रिय – Nepali Audio Video
पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री बेनजिर भुट्टो हत्या जिम्मेवारी तालिवानले लियो !
इस्लामावाद पाकिस्तानी पूर्वप्रधानमन्त्री बेनजीर भुट्टोको हत्याको जिम्मेवारी आतंकवादी समूह तालिवानले लिएको छ। भुट्टोले अमेरिकासँग मिलेर ‘मुजाहिद्दिन–ए–इस्लाम’विरुद्ध एक्सन लिने योजना बनाएकाले उनको हत्या गरेको तालिवानका संस्थापक नेता बैतुल्लाह मेहसुदद्वारा लिखित पुस्तकमा दाबी गरिएको छ। भर्खरै प्रकाशित पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार भुट्टो सत्तामा फर्किएपछि अमेरिकासँग मिलेर ‘मुजाहिद्दिन–ए–इस्लाम’विरुद्ध.....
आफ्नै १३ बच्चालाई बन्धक बनाउने अपराधी अभिभावक यसरी पक्राउ !
क्यालिफोर्निया अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा आफ्नै बच्चालाई बन्धक बनाउने अभिभावकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। क्यालिफोर्नियास्थित लस–एन्जल्सदेखि ५९ किलोमिटर दक्षिण पश्चिममा पर्ने पेरिसमा आफ्नै १३ बच्चालाई बन्धक बनाउने आमाबुवालाई नियन्त्रणमा लिई बच्चाहरुको उद्दार गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। बच्चाहरुलाई बेडमा चेनले बाँधेर ताला लगाएर राखिएको थियो। जसमा.....
जापानी अभिनेत्री एवं पूर्वपोर्नस्टार सोराद्वारा धुमधामका साथ विहे गर्ने घोषणा !
बेइजिङ अभिनेत्री एवं जापानी पूर्वपोर्नस्टार सोरा एओईले विहेको घोषणा गरेकी छन्। चीनमा सेक्सका बारेमा सचेतना जगाउने ‘शिक्षिका’ मानिने सोराको विहेको अनलाइन घोषणाले अहिले चिनियाँ सामाजिक सञ्जालमा तरंग ल्याएको छ। उनका दर्शक तथा शुभेच्छक उत्साहित भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। यो यसकारण हो कि उनले.....
बिहेकै दिन बेहुलीले जन्माइन् बच्चा, अब एनिभर्सरी र बर्थडे सँगै !
जब कुनै युवतीले आफ्नो बिहेकै दिन बच्चा जन्माउँछिन् भने त्यो घटना हाम्रो समाजमा त पाच्य हुने खालकै हुँदैन । किनकी हामीकहाँ विवाह अघिको यौन सम्बन्ध बर्जित छ सामाजिक रुपमा । तर बेलायतमा चाहीँ हालै यस्तै भएको छ । बेहुली आफ्नो बिहेकै दिन वेडिङ गाउनमै.....
इजरायली सेनामाथि प्यालेस्टाइनी किशोरीको थप्पड !
इजरायली सेनाका दुई जवान काँधमा बन्दुक अड्याएर उभिइरहेका थिए । त्यहीबेला पछाडिबाट दुई प्यालेस्टाइनी किशोरीहरु आउँछन् । तीमध्ये एक हुन् अहद तमीमी । अहद तमीमी सेनाप्रति आक्रोशित हुन्छिन्, ‘बाहिर निस्क, यहाँबाट हट ।’ उनको आक्रोशले इजरायली सैनिकलाई केही असर पर्दैन । तर, अहल.....
पुस १८, २०७४ एजेन्सी : दक्षिण कोरियाले उत्तर कोरियाली नेता किम जोन उनले नयाँ वर्षको अवसर दिएको अभिव्यक्तिको स्वागत गरेको छ। यसै वर्ष दक्षिण कोरियामा आयोजना गर्न लागेको शीतकालीन ओलम्पिकमा सहभागिता जनाउने इच्छा व्यक्त गरिएको किमको भनाइलार्इ राष्ट्रपति कार्यालय ब्लूहाउसले स्वागत गरेको हो। सिन्हवाले.....
नयाँ बर्षको पहिलो रात १७ हजार चालक मापसे विरुद्धको कारबाहीमा
भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा नयाँ बर्ष लाग्ने रातमा १७ हजार जनाभन्दा बढीले मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी साधन चलाएको पाइएको छ । आइतबार राती मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने १७ हजार जनालाई दण्डित गरिएको दिल्ली प्रहरीले जनाएको छ । उनीहरु मध्ये अधिकांश महिला.....
यी हुन् विश्वमै सबै बन्द लामो लिङ्ग भएको व्यक्ति जसको लम्बाई झन्डै आधा मिटर छ !
एजेन्सी उनी विश्वमा सबैभन्दा लामो लिंग भएका पुरुष हुन्, जसको यौनांग झण्डै आधा मिटर लामो छ । त्यो भिमकाय लिंगको कारण उनको यौनजीवन मात्र होइन सामान्य दैनिकी समेत कष्टप्रद बनिरहेको छ । तर उनी शल्यक्रिया गरेर लिंगको उपचार गरी साइज घटाउन चाहँदैनन् । लिंगको.....